चर्चित पत्रकार गोकर्ण गौतमको निधन — Sanchar Kendra
१खेतमा काम गरिरहेका ४३ मजदुरको घाँ’टी रे’टेर ह’त्या
२उदयपुरमा शक्तिशाली ब’म वि’स्फोट, ४ जना घाइते, थप विवरणसहित
३अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड
४ओलीले एउटा पद नछाेडेसम्म पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य हुँदैन- देवेन्द्र पौडेल
५कोरोना संक्रमितको मृत्युमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड, मृतककाे संख्या १५ लाख नाघ्यो
६कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, पौडेलको गिरफ्तारीबारे छलफल हुने
७ओली-प्रचण्ड फुट्ने निश्चत बनेपछि विद्या भण्डारीले चालिन यस्ताे कदम, नेकपाभित्र तरंग
८आज २०७७ मंसिर १९ गते शुक्रबार, यी राशिका व्यक्तिलाई हुनेछ एकदमै शुभ
९मंसिरमै विवाह बन्धनमा बाधिदै नायिका श्वेता खड्का, को हुन् दुलाह ?
१०भिजाएको चना खानुहोस्, स्वास्थ्यलाई हुनेछन् यस्ता फाइदा
११यस्ता छन् जाडोमा गहतको झोल खाँदा हुने चामत्कारिक फाइदा
१२यस्ता छन् रायोको साग खानुका ६ फाईदा, कुन-कुन रोगबाट बचाउँछ ?
काठमाडौं । सिने क्षेत्रका चर्चित पत्रकार गोकर्ण गौतमको २९ बर्षको कलिलो उमेरमा निधन भएको छ। गौतमको बिहीबार बिहान न्यूरो अस्पताल बाँसबारीमा उपचारको क्रममा निधन भएको परिवारले जनाएको छ।
टाउकोको नसा सुनिएको देखिएपछि ३ दिन अगाडी उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए। न्यूरो अस्पतालमा उनको शल्यक्रिया भएको थियो। शल्यक्रिया सफल नहुँदा उनको निधन भएको बताइएको छ। हाल उनी कान्तिपुर दैनिकमा उपसम्पादकको रुपमा कार्यरत थिए।
पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका उनी हेटौंडाका स्थायी बासिन्दा हुन। गौतमले काठमाडौँमा बसेर पत्रकारिता गर्दै आएका थिए ।
उनले अंग्रेजी पत्रिका न्यूपेपर, देशान्तर, नेपाल म्यागजिनमा पनि काम गरेका थिए। उनका श्रीमती, आमाबुवा र तीन दाइ छन्। उनको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने छ।